तपाईंले खेल्दा रमाइलो र तपाईंको सबैभन्दा राम्रो मुस्कान ल्याउनुहुन्छ इमोजी ग्रह™, स्वीडिश स्टुडियोहरूको नवीनतम सिर्जना Netent। 23 अगस्त अगस्ट 2017 मा चलचित्रको रिलीज संग मेल खाने को लागी अनुसूचित गरिएको छ, हामी एक मनोरञ्जन, मजाकिया र रिती खेल को अनुमान छ कि हाम्रो स्लटिंग दिनहरुलाई हल्का गर्न को लागी। स्लॉटले मेगा र सुपर मेगा जीतहरू उत्पादन गर्न सम्भावित पाँचवटा आकर्षक बोनस सुविधाहरूमध्ये एक ट्रिगर गर्न इमोजी एकत्र गर्ने खेलाडीहरूले देख्नेछन्। कताई रिल्स र क्लस्टर भुक्तानीको सट्टामा एलालेन ™ को सट्टा पङ्क्तिहरूको सट्टा हाम्रो प्रत्याशितता बढ्यो कि यो वास्तवमा केहि रोमाञ्चक हुन सक्छ।
खेल लोड गरेपछि पहिलो दृश्य मेरो जबरजस्ती छोड्यो। स्क्रिनको माध्यमबाट दुई "अनुदान" लाइन-नाच! वास्तवमा, नेटन्ट? ठीक छ, चलो "अशुद्ध पार" को अनुहार हेर्न र पहिले छाप को रूप मा उत्प्रेरित हुन सक्छ कि खेल वास्तव मा उत्पादन हुनेछ।
इमोजी ग्रह अपडेट गरिएको: जनवरी 28, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 इमोजी ग्रह
2.0.0.1 खेल बॉल
2.0.0.3 बर्लिन बब
2.0.0.4 आयरिश आंखहरू
2.0.0.5 डेल्क्स वरिपरि एकपटक एकाधिकार
2.0.0.7 भोल्टहरू र बोल्टहरू
2.0.0.8 Xing अभिभावक